निजि क्षेत्रको एक हस्ती इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनि कम्पनि क्लासिक टेकले घरयासी ग्राहकहरुलाई मध्यनजर गर्दै फाइबर टु होम इन्टरनेट सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले 30 Mbps, 40 Mbps र 60 Mbps को स्पिडको प्याकेजमा घरघरमा इन्टरनेट सेवा दिदै आइरहेको छ। यो प्याकेज अन्तर्गत Classic Prabhu TV पनि पाउनुहुनेछ।
40 Mbps स्पिडको इन्टरनेट तपाईले आफ्नो घरमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्याकेज अन्तर्गत सितैमा Classic Prabhu TV पनि पाउनुहुनेछ तर यो अफर सिमित अबधिको लागी मात्र लागु रहेको छ।
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १, ८५० /-, वाइफ़ाइ फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २, ५००।/- , फाइबर केवल रु. १, ५०० /- , ONU Deposit रकम रु. ५०० /-, प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) शुल्क रु. २, ००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. ८, ८५० /- पर्नेछ। तर तपाईले प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) को सट्टामा सेट अप बक्स Activation (Secondary) पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र सेट अप बक्स Activation (Secondary) को शुल्क रु. ४००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु.१००० /- पर्नेछ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ५, ४४८ /-, वाइफ़ाइ फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २, ५००।/- , फाइबर केवल रु. १, ००० /- , ONU Deposit रकम रु. ५०० /-, प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) शुल्क रु. २, ००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. ११, ९४८ /- पर्नेछ। तर तपाईले प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) को सट्टामा सेट अप बक्स Activation (Secondary) पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र सेट अप बक्स Activation (Secondary) को शुल्क रु. ४००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु.१००० /- पर्नेछ।
६ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ६ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ९, ००० /-, वाइफ़ाइ फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २,००० ।/- , फाइबर केवल रु. ५०० /- , ONU Deposit रकम रु. ५०० /-, प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) शुल्क रु. २, ००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. १४, ५०० /- पर्नेछ। तर तपाईले प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) को सट्टामा सेट अप बक्स Activation (Secondary) पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र सेट अप बक्स Activation (Secondary) को शुल्क रु. ४००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु.१००० /- पर्नेछ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १७, ९४६ /-, वाइफ़ाइ फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. ० ।/-(निशुल्क) , फाइबर केवल रु. ० /- (निशुल्क ) , ONU Deposit रकम रु. ५०० /-, प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) शुल्क रु. ० /-(निशुल्क) र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. १८, ४९६ /- पर्नेछ। तर तपाईले प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) को सट्टामा सेट अप बक्स Activation (Secondary) पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र सेट अप बक्स Activation (Secondary) को शुल्क रु. १, ५०० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु.५०० /- पर्नेछ।
60 Mbps स्पिडको इन्टरनेट तपाईले आफ्नो घरमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्याकेज अन्तर्गत सितैमा Classic Prabhu TV पनि पाउनुहुनेछ तर यो अफर सिमित अबधिको लागी मात्र लागु रहेको छ।
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. २, २०० /-, वाइफ़ाइ फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २, ५००।/- , फाइबर केवल रु. १, ५०० /- , ONU Deposit रकम रु. ५०० /-, प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) शुल्क रु. २, ००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. ९, २०० /- पर्नेछ। तर तपाईले प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) को सट्टामा सेट अप बक्स Activation (Secondary) पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र सेट अप बक्स Activation (Secondary) को शुल्क रु. ४००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- पर्नेछ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ६, ४५० /-, वाइफ़ाइ फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २, ५००।/- , फाइबर केवल रु. १, ००० /- , ONU Deposit रकम रु. ५०० /-, प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) शुल्क रु. २, ००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. १२, ९५० /- पर्नेछ। तर तपाईले प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) को सट्टामा सेट अप बक्स Activation (Secondary) पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र सेट अप बक्स Activation (Secondary) को शुल्क रु. ४००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु.१००० /- पर्नेछ।
६ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ६ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ११, ४०० /-, वाइफ़ाइ फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २,००० ।/- , फाइबर केवल रु. ५०० /- , ONU Deposit रकम रु. ५०० /-, प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) शुल्क रु. २, ००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. १५, ९०० /- पर्नेछ। तर तपाईले प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) को सट्टामा सेट अप बक्स Activation (Secondary) पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र सेट अप बक्स Activation (Secondary) को शुल्क रु. ४००० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु.१००० /- पर्नेछ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. २१, ९९६ /-, वाइफ़ाइ फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. ० ।/-(निशुल्क) , फाइबर केवल रु. ० /- (निशुल्क ) , ONU Deposit रकम रु. ५०० /-, प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) शुल्क रु. ० /-(निशुल्क) र सेट अप बक्स Deposit रकम रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. २२, ९९६ /- पर्नेछ। तर तपाईले प्रभु टिभीको लागी सेट अप बक्स Activation (Primary) को सट्टामा सेट अप बक्स Activation (Secondary) पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र सेट अप बक्स Activation (Secondary) को शुल्क रु. १, ५०० /- र सेट अप बक्स Deposit रकम रु.५०० /- पर्नेछ।
यस फाइबर इन्टरनेट प्याकेज अन्तर्गत तपाईले प्रभु टिभी जडान नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने STB Activation र STB Deposit को लागी तपाईले शुल्क तिर्नुपर्दैन।
वेबसर्फर डीसहोम एनसेल वर्ल्डलिङ्क नेपाल टेलिकम ब्रोडलिङ्क सुबिसु भायनेट क्लासिक टेक